Mpanoratra: Editor HTML | Avy amin'ny Linux
phico | | fampiharana
Te hampahafantatra anao aho Composer. Mpanonta HTML «WYSIWYG» -Ny zavatra hitanao dia azonao, na izay hitanao no azonao. Izy io dia singa iray amin'ny suite Iceape en Debianna Seamonkey en Ubuntu.
Mora ampiasaina toy ny tonian-dahatsoratra.
Tsy mila fahalalana manokana momba ny HTML mila ampiasaina.
Ny bokotra eo amin'ny bara fiasana dia ahafahanao manampy lisitra, latabatra, sary, rohy mankany amin'ny pejy hafa, loko sy endritsoratra sns.
Rehefa manova pejy ianao dia afaka mahita fomba efatra samihafa: Tags normal, Tags HTML, Source HTML, ary Preview.
Azontsika ampidirina ao amin'ny pejinay ireo takelaka CSS Style.
Fanampiana namboarina ho anisan'ny fanampiana ankapobeny an'ny suite, na Iceape io na Seamonkey.
Fanamarinana ny tsipelina «rehefa manoratra» ianao, ary koa ny fanitsiana isan-teny amin'ny fiteny izay napetraka sy nambaranay
Raha fintinina, ny Composite dia manana safidy maro izay tsy maintsy ho hitanao ho anao raha manapa-kevitra ny hampiasa azy ianao.
Mandehana hatrany amin'ny Tsotra ka hatrany amin'ny Complex. Raha mila manao pejy na tranokala tsotra ianao dia aza misalasala mampiasa ity mpanonta ity. Ratsy loatra ny interface sy ny fanampiana tonga amin'ny teny anglisy.
Farafaharatsiny mba tsy nahita fomba hihazonana ireo fonosana amin'ny teny espaniola aho. Raha manapa-kevitra izy ireo amin'ny farany hanangana tranokala static na static amin'ny ankamaroany miaraka amin'ny fitaovana sarotra toa ny WordPress, Drupal, Jomla, sns., Izay mitaky mpizara tranonkala, database MySql na PostgreSQL, ary PHP ho farafaharatsiny, heveriko fa ho izany atombohy amin'ny Complex.
Amin'ny maha data anecdotal anao dia lazaiko anao fa "nahita" ny Composer aho tamin'ny taona 2000 teo am-pampiasa ny suite NetScape, raim-pianakaviana Mozilla iray manontolo sy ireo niavian'ny tany: Firefox, Thunderbird, Iceweasel, Icedove, Iceape, Seamonkey, sns. Izaho manokana dia ampiasaiko hanoratra lahatsoratra misy endrika.
Mampiasa ny OpenOffice Writer aho hamaky antontan-taratasy amin'ny endrika hafa.
Ary efa hitanao ve ny Kompozer ?. Tsy nametraka azy io aho mba hitady fandraisana anjara, saingy mieritreritra aho fa tokony hiresaka izany isika. Toy izany koa Composer, fa mahaleo tena.
Ary hatramin'ny manaraka, ry namana!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Mpanoratra: Editor HTML
Ity karazana editera ity (WYSIWYG) no ratsy indrindra amin'ny fanaovana pejy web. Voalohany indrindra, tsy mamporisika ny fianarana html izy ireo, mampiditra kaody tsy ilaina be dia be izy ireo, mamorona fomba fanao amin'ny famolavolana tranonkala ratsy (Mampiasà latabatra ho an'ny famolavolana ny pejy), mifanohitra amin'ny tranonkala semantika izany; Raha fintinina, ity karazana fampiharana ity dia TSY tokony hatolotra anio. Inona koa, ireo mpampivelatra fampiharana toa ny NVU sy Kompozer dia nanakana ny fivoarany taona maro lasa izay, satria fantatr'izy ireo fa tsy fitaovana tsara indrindra amin'ny famoronana pejy web izany.
Mba hanoratana lahatsoratra misy endrika dia misy mpamoaka lahatsoratra feno kokoa.
tadidio fa ankizy maro no mety ho liana kokoa amin'ny fanamboarana pejy maivana ary ampidirina fehezan-dalàna html kely. ho an'ny olona mandroso ity karazana programa ity dia mety tsy misy dikany fa ho an'ny olona tsy mahalala na inona na inona momba ny html ...
Misy koa Griffon Manga
Ary koa, vao avy namaky azy io tamin'ny wikipedia aho, “BlueGriffon manaraka ny fenitry ny tranonkala W3C. Izy io dia afaka mamorona sy manitsy pejy mifanaraka amin'ny HTML 4, XHTML 1.1, HTML 5 ary XHTML 5 ».
Mankato ny fenitra.
Manana ny interface sy ny fanampiana amin'ny Espaniôla aho. Napetrako ny fonosana iceape-l10n-en-ar ao koa ireo fonosam-pokontany rehetra. Mampiasa an'i Debian Weezy aho.
Ny lafy ratsy indrindra dia ireo mpampianatra any amin'ny anjerimanontolo no mampianatra antsika fampandrosoana ny tranonkala miaraka amin'ny Dreamweaver ihany.
soratra masina sy plugin emmet.
Mba hanaovana tranokala, ny tsara indrindra dia Bluefish. Tsy "WYSIWYG" izany, fa mahafinaritra ny fotodrafitrasa sy ny hitsin-dàlana hametrahana kaody.
Resaka tsiro foana io fa ny marina dia ny manisy kaody ny tranonkala ny zavatra tsara indrindra ho anao dia ny zavatra toa ny soratra Sublime, VIM, Gedit, sns. Tsy manohitra WYSIWYG mihitsy aho, fa tsy mila azy ireo koa. Ankehitriny, raha misy iray izay mendrika azy dia Bluegriffon, raha ary raha toa ka zakanao ny plugins, satria ny xrgriffon tsy misy plugins dia xD maharikoriko saika tsy ilaina.
Ny tena izy dia tsy ratsy ny fananana WYSIWYG satria ialana amin'ny fisokafanao ny browser matetika ary manana topi-maso ianao, avy eo tsy maintsy sokafanao ny navigateur raha te hampifanaraka anao sy ny zavatra ... Sublime Text no ampiasaiko izao fa Heveriko fa ny mankany amin'ny VIM (Kvim) na mijery raha mandoa ny plug-n bluegriffon aho ary mampiasa azy.
Sambany aho "nandre" (namaky, raha ny tena marina) momba ny Kvim. * Googling *
Misy plugin saro-pantarina antsoina hoe livereload fa miasa ihany ho an'ny mac raha ny zavatra azoko na dia misy zavatra mitovy amin'ny firefox eny an-dalana aza, miaraka amin'ny fanatsarana sidebar tsara amin'ny fipihana eo amin'ny bara fisoka ahafahanao misokatra ao anaty tranokala na dia tsy fantatro aza ny fomba hampandehanana azy. linux.
Mankasitraka REHETRA amin'ny fanehoan-kevitra sy ny fahombiazana !!!
Ankasitrahana izany, satria izay notadiaviko dia mihoatra ny ampy. Ny marina dia tsy liana aho ary tsy manam-potoana hanombohana fandalinana fandaharana HTML, ny hany ilaiko dia ny afaka manova hadalana 2 amin'ny pejy iray.
Faly aho fa nanompo anao zavatra ity. Ampiasako ihany koa izy io handrafetana tranokala miorim-paka ary miaraka amin'ireo takelaka haingon-trano sy ny rehetra.